Fianan-tokantrano:Mbola maro an’isa ny vehivavy hiharan’ny herisetra -
AccueilVaovao SamihafaFianan-tokantrano:Mbola maro an’isa ny vehivavy hiharan’ny herisetra
Fianan-tokantrano:Mbola maro an’isa ny vehivavy hiharan’ny herisetra
22/11/2016 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Araka ny fanadihadiana nataon’ny fikambanana C-for-C, vehivavy 7 amin’ireo 10 manambady manerana an’i Madagasikara no iharan’ny herisetra ao an-tokantrano. Ho an’Antananarivo manokana indray dia 65 isan-jaton’ireo vehivavy ao anaty tokantrano no iharan’izany herisetra izany. Ny valin’ny fanadihadiana nataon’ny C-for-C tamin’ny fokontany 10 eto an-drenivohitra ihany koa no nahalalana fa 70 isan-jaton’ny lehilahy dia manaiky fa manao herisetra amin’ny vadiny matetika, ny 30 isan-jato kosa nilaza fa tsindraindray ary ny 100 isan-jato dia nanaiky ihany koa fa efa nikasi-tanana ny andefimandriny. Manoloana io valin’ny fanadihadiana io, nanatanteraka fanentanana ny fikambanana C-for-C entina hiadiana amin’ny herisetra mahazo ny vehivavy, tamin’ny alalan’ny tetikasa Sahala.
Dimy volana taorian’ny fampahafantarana amin’ny fomba ofisialy ny tetikasa sahala dia maro ireo hetsika nataon’ny fikambanana nentina miady amin’ireo karazana herisetra mianjady amin’ny vehivavy, ka nanentanana indrindra ireo lehilahy. “Tao anatin’izany, nisy ny atrikasa fampahafantarana ireo lalàna sy ny kolontsaina malagasy izay afaka atao fitaovana hiadiana amin’ny herisetra. Nisy ny vokatra natonta taorian’izay, dia ireo bokikely mampahafantatra ireo lalàna sy kolontsaina ireo, izay hozaraina tsy ho ela amin’ireo fokontany sy trano fihainoana, ka ho fitaovana ho an’ireo lehilahy manoloana ireo herisetra misy”, Nantenaina Sariaka, tale mpanatanteraka ny Ong C-for-C. Eo ihany koa ny fandaharana izay hovokarina miaraka amin’ireo haino aman-jery isan-tsokajiny, entina hanabeazana ireo olom-pirenena, amin’ny alalan’ny lalàna, tsy tia herisetra.
16 andro hiadiana amin’ny herisetra
Ankehitriny, tonga amin’ny fotoana hanaovana fanentanana faobe ny tetikasa sahala ka hanao hetsika 16 andro iadiana amin’ny herisetra, izay hanentanana indrindra ireo lehilahy. “Mandritra io tapa-bolana io hisy ny hetsika ataon’ny sahala hitondra volavola fanatsarana ireo lalàna mba hisongadinan’ny herisetra tsotra sy ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy satria tsy ampy ny fampahafantarana ny lalàna eto amintsika. Hisy ihany koa ny fifaninanana baolina kitra eo amin’ny samy fokontany, ka mandritra io fifaninanana io no hanaovana ireo fanentanana isan-karazany, hampirisihana ny fiaraha-mientan’ny lehilahy amin’ny ady amin’ny herisetra sy handisoana ny hevitry ny olona amin’ny lehilahy, izay matetika ampifandraisina amin’ny herisetra”, Herimanantsoa, solontenan’ny fikambanana jeudi . Ankoatra ny hetsika lalao baolina kitra, hisy koa ny sekolin’ny ray aman-dreny izay hatao eny anivon’ireo fokontany sasantsasany, sy ny fifaninanana tamaboha hataon’ireo ankizy entina hampitana hafatra ho an’ireo lehilahy.
Marihina fa maneran-tany dia efa misy ny tambazotran’ireo lehilahy izay miady amin’ny herisetra, antsoina hoe Men Engage, ka ny fikambanan’ny C-for-C no mitantana azy eto Madagasikara. Ao anatin’ny ady amin’ny herisetra izay hatrany, nisy ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny C-for-C sy ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Anton’ny fifanekena ny fanentanana ireo sekoly mba hanabe ireo ankizy amin’ny fandraisana andraikitra sahady mba hanafoanana ny herisetra, haverina ny fandaharam-pianarana izay mikasika ny fanabeazana ho olom-pirenena vanona, ka isan’ny hovoizina amin’izany ny sehatra miralenta sy ny hoe “lehilahy vanona”.
Dia tsy misy valaka amin’ny nataon-dRavalomanana Marc no nataon’i Andry rajoelina nandritra ny ffiampiarahabana noho ny taona vaovao tetsy Ambohimangakely ny faran’ny herinandro teo, ny an- dRavalomanana dia nambarany fa ataony mitovy amin’ny nitantanany ny ...Tohiny